I-Apple Bukela -i-Apple Bukela | Ndisuka mac
Ekugqibeleni emva ubude obude ukuyaiminyaka egcwele amarhe kunye nokuthelekelela malunga ne-Apple iWatch enokubakho, kwi-Keynote yokugqibela ngoLwesibini we-9 kaSeptemba ka-2014 u-Apple wasinika yona i-watch watch. Le wotshi sonke ebesicinga ukuba izakubizwa ngokuba yiWatch ngenxa yamalungelo awodwa omenzi wechiza iApple enayo ngeli gama, iphele ibizwa ngokuba ngu-e Apple Watch ukuba yome.
Umphathi wenkampani, uTim Cook, wayibeka kwi-Keynote ngo-Septemba 9, 2014 emva kwebinzana eliyintsomi awenza ukuba adume kakhulu kwinkampani ngokwayo xa ongasekhoyo uSteve Jobs wayikhankanya "Enye into ..." Enye into yokuqala le yeyokuqala kuTim Cook kwimbali yakhe njenge-CEO yeApple kwaye akayekanga ukukhuthaza uluntu olulindelekileyo ukuba luphulaphule into abayithandayo kakhulu.
Iimodeli ze3 Apple Watch
I-Apple iveza le Watch entsha kulonwabo lwayo lwasesidlangalaleni kwaye iyazithemba iimodeli ezintathu ezahlukeneyo kunye nobukhulu obukhuluiminyaka eyahlukeneyo kwizandla zamadoda nabasetyhini. Umzekelo we intsimbi, imodeli yezemidlalo ye ialuminium kunye nomnye umnxeba Edition de 18 ikarati yegolide.
Ngale ndlela, iApple iphelisa intelekelelo kunye namahemuhemu ngokubonisa into ebizwa ngokuba yiyo iqabane eligqibeleleyo izixhobo zakho ze-iOS ngakumbi i-iPhone.
Iindaba zeApple zokubukela
Ukusuka kwam eMac uza kulifumana lonke ulwazi kwinto yokuqala enxitywayo yenkampani yeapile elilumkileyo ukusuka kusuku lokuqala lokumiliselwa kwayo. Yonwabele Apple Watch kunye nazo zonke iindaba zakho nathi.
Incwadi kunye nawo onke amanqanaba e-Apple Watch
por UJordi Gimenez yenzayo Iintsuku ze3 .
Ngaba uyazi ukuba kukho incwadana apho unokubona khona imisebenzi yenqanaba ngalinye le ...
por UIgnacio Sala yenzayo Iveki e-1 .
I-Apple Watch ibe sesona sixhobo sibalaseleyo sokubeka iliso kumzimba kunye nomsebenzi wezemidlalo wabasebenzisi….
I-Apple ilibazise amandla okuthwala amakhadi asemthethweni kwi-Wallet kude kube ngu-2022
por UToni Cortes yenzayo Iveki e-1 .
I-Apple yatsibela echibini kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo ibhengeza ukuba ngaphambi kokuphela konyaka, kwamanye amazwe ...
Iintengiso ze-Apple Watch ziyaqhubeka zikhokela imarike ngokutsho kweCouterpoint Research
por UJordi Gimenez yenzayo Iiveki ze2 .
Iiwotshi ezihlakaniphile ze-Apple zeza kwimarike kade kade kodwa unyaka nonyaka ziye zazibonakalisa njengezona zibalaseleyo ...
I-Apple Watch Series 8 ayinakuze itshintshe uyilo konke konke
Ngaphambi kokuba baqale inqaku eliphambili le-Apple ngoSeptemba ophelileyo apho kwafuneka basazise kwinto entsha ...
I-Apple ikhupha i-WatchOS 8.1.1 kwaye ilungisa i-Apple Watch Series 7 uMba wokuTshaja
por UManuel Alonso yenzayo Iiveki ze2 .
Ngomahluko weeyure ezimbalwa phakathi kokusungulwa kwe-beta entsha ye-Apple Watch, inkampani yaseMelika ine ...
Ukuthunyelwa kwe-Apple Watch akuweli ngaphantsi kweeveki ezi-5
por UJordi Gimenez yenzayo Iiveki ze4 .
Ngokuqinisekileyo uninzi lwenu lulungiselela ileta eya kwiZilumko eziNtathu kulo nyaka kwaye ningathanda ukukwazi ...
Kutheni i-Apple Watch Series 7 yesikrini iyindlela eyiyo
por UManuel Alonso yenzayo Inyanga e-1 .
Kwangelo xesha linye i-Apple ibonise iMacBook Pro entsha, i-Apple Watch Series entsha yaboniswa eluntwini ...
I-Apple Watch Challenge ibhiyozela uSuku lwamagqala
por UJordi Gimenez yenzayo Inyanga e-1 .
Umceli mngeni kumagqala ngomnye wale mingeni i-Apple iqhubeka ukuyishiya kuphela kubasebenzisi ...
Ngokunjalo iNomad Sport Band imitya eluhlaza kunye nengwevu yeApple Watch
Ngokungathandabuzekiyo, ezona zixhobo zidumileyo phakathi kwabasebenzisi be-Apple Watch zizitya kunye ...
Amahemuhemu malunga novavanyo lweglucose yegazi kwi-Apple Watch Series 8 yokubuya
por UToni Cortes yenzayo Inyanga e-1 .
Kudala sisiva amahemuhemu malunga nenzwa entsha enokuthi ibandakanye uthotho lwexesha elizayo lwe-Apple Watch: a ...
Isizukulwana sokuqala se-Apple Watch kunye noThotho 1 azifani
Funda indlela yokukhuphela kunye nokufaka usetyenziso kwi-Apple Watch yakho